Nechokwadi vakachengeteka mishonga yedu uye vashandi - China Kingswel Machinery
Nechokwadi vakachengeteka mishonga yedu uye vashandi
Sezvo coronavirus itsva ukasha China, kusvikira madhipatimendi ehurumende, pasi vanhuwo zvavo, tiri Kingswel Machinery munzvimbo zvose inofamba upenyu, nhanho dzose vezvikwata zviri kushingaira dzingatevedzwa kuita basa muzvidzivirire dambudziko uye kuzvidzora basa rakanaka.
Kunyange zvazvo fekitari yedu hakusi chinoumba nzvimbo - Wuhan, asi hatina kutora kurerutsa kuita, kekutanga kuita. Musi waJanuary 27, isu akamisa fekitari Kudzivirira dambudziko basa ane Kudzivirira nechimbichimbi utungamiri boka uye nechimbichimbi norudaviro chikwata, uye ipapo nokukurumidza uye zvinobudirira vakava operative. We pakarepo kusunungurwa zvokungwarira nokuda yatanga yedu yepamutemo Website, QQ boka, WeChat boka, WeChat Official Account, uye chekambani nhau mitemo papuratifomu. Munguva kekutanga isu Akasunungura kudzivirira iri itsva coronavirus nemabayo uye resumption basa-related ruzivo, kwaziso wenyama ezvinhu wose aifamba uye yaizotangira munyika yekwako. Mukati pazuva, isu tapedza nokuongorora kwakaitwa vashandi vakanga vaenda kumusha kwavo panguva Spring Festival yezororo.
Saka kure, hapana kunze hofisi vashandi akaongorora ndakawana mhosva vasina murwere nefivha uye chikosoro. Zvadaro, tichabata zvakasimba kutevera zvinodiwa ehurumende uye zvikwata kudzivirira dambudziko kudzokorora kudzoka yevashandi kuitira kuti kudzivirira uye masimba panzvimbo.
fekitari yedu yakatengwa vazhinji zvokurapa zvifukidziro, mishonga yokuuraya utachiona, michini pamwero thermometers, nezvimwewo, uye dzakatanga batch mangé fekitari vashandi rokuongorora uye achiedza basa rokutanga, apo disinfected zvose-kumativi kaviri pazuva riri kugadzirwa kukura madhipatimendi uye chirimwa nemahofisi .
Kunyange pasina zviratidzo zvechirwere yatanga inowanikwa fekitari yedu, isu vachiri-kumativi ose kudzivirira uye kuzvidzora, kuti tibu- yakachengeteka mishonga yedu, inonzi yakachengeteka revashandi.
Maererano voruzhinji mashoko WHO wacho, Mabhokisi kubva China haangatenderi kutakura utachiwana. nzvongo Izvi zvichaita vasakanganise kunze kwenyika pamuchinjikwa-muganhu nhumbi, saka unogona kuva chaizvo nechokwadi kugamuchira zvakanaka zvigadzirwa kubva China, uye ticharamba kukupa hwakanakisisa pashure-okutengesa basa.
Pakupedzisira, ndinoda kuonga kwedu vatengi vavatorwa shamwari vagara nehanya nesu. Kwaitika, vazhinji okuberekwa vatengi kuonana isu kokutanga, akabvunza uye hanya edu ezvinhu aripo. Pano, zvose tsvimbo Kingswel Machinery angada kutaura kuonga kwedu zvikuru yakatendeseka kwamuri!
Post nguva: Feb-28-2020